Taliska ciidanka Xoogga Dalka oo faah faahin ka bixiyay dagaalkii Buulo-Guduud | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliska ciidanka Xoogga Dalka oo faah faahin ka bixiyay dagaalkii Buulo-Guduud
Taliska ciidanka Xoogga Dalka oo faah faahin ka bixiyay dagaalkii Buulo-Guduud
Janaraal Ismaaciil Saxar Diid oo ah taliyaha qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaliyeed oo wareysi gaar ah siiyay Wakaaladda SONNA ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalkii saaka ka dhacay Deegaanka Buulo Guduug ee Duleedka Koonfureed ee magaalada Kismaayo.
Taliyaha ayaa sheegay in Maleeshiyaadka Alshabaab ay saaka waaberigii weerar ku soo qaadeen Xero ay ku sugan yihiin Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Jubbalaland oo ku taala deegaankaasi Buulo-Guduud oo qayaas ahaantii 30-KM dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Kisamaayo, wuxuuna sheegay in Khasaaro xoogan uu ka soo gaarey kooxdii weerarka soo qaaday ee Shabaab, ayna kaga dhinteen ilaa 20 maleeshiyaad ah kuwo kalena ay kaga dhaawacmeen.
Janaraal Ismaaciil Saxadiir ayaa sheegay in dhankooda uu jiro qasaare aan sidaasi u badnayn,maadaam ay Ciidamadu ka war hayeen qorshaha maleeshiyaadkaasi ay ku soo weerareen deegaankaasi,lagana hortagay,isagoo been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in Shabaab ay xeradaasi ka kaxeysteen gaadiid dagaal oo ay ciidamadu leeyihiin.
“Abaaro 5:10 daqiiqo ee arroornimadii ayay weerar ku soo qaadeen xeradaasi, dagaal adag ayaa meesha ka dhacay, waxay ku soo weerareen qarax, Ciidamada ayaana gaarigii qarxiyay oo fashiliyay, ma uusan gaarin meeshii ay ugu talagaleen,Khasaare ayaa jira labada dhinac,hadana deegaankaasi waxaa gacanta ku haya ciidamada Xoogga dalka,ilaa 20 maleeshiyo ah ayaa kaga dhintay dagaalkaasi Shabaab, firxadkoodi ayaan daba joognaa”, Ayuu yiri Taliye Saxardiid.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa wada howlgalo lagu baadi goobayo maleeshiyaadkii Shabaab ee weerarka soo qaadey, waxaana taliye Saxardiid uu sheegay in ay uga daba tagidoonaan meelkasta oo ay ku dhuumaalaysanayaan.
Previous articleWasiirka Warfaafinta XFS oo ku amaanay Qurba joogta Soomaaliyeed dowrkoodi ku aadan horumarka dalka
Next articleTaliska ciidanka Xoogga Dalka oo faah faahin ka bixiyay dagaalkii Buulo-Guduud